उत्तम भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू – Vocre
वेबसाइट अनुवादको लागि सबै भन्दा राम्रो भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू पत्ता लगाउनुहोस्, आवाज अनुवाद, र वास्तविक समय अनुवाद. जबकि यी केही अनुप्रयोगहरू भुक्तान गरिएको छ, अरूले निःशुल्क संस्करण वा in-app खरीद प्रस्ताव गर्दछ.
भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू विगत दशकमा लामो यात्रामा आयो. तिनीहरूले हामीलाई अन्य संस्कृतिहरूसँग संवाद गर्न मद्दत गर्न सक्छन्, व्यापार वाक्यांशहरू बुझ्नुहोस्, र हाम्रो शिक्षा पनि अगाडि.
यी अनुप्रयोगहरूले हामीलाई भाषा अवरोधहरू पार गर्न पनि मद्दत गर्दछ कि अन्यथा हामीलाई एक अर्कालाई चिन्नबाट रोक्न सक्छ. उत्तम अनुवाद अनुप्रयोगहरूले माथिका सबै गर्न सक्दछन्.
कसरी सर्वश्रेष्ठ भाषा अनुवाद अनुप्रयोग खोज्ने
जब यो उत्तम भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू फेला पार्न आउँदछ, तपाईं प्रत्येक अनुप्रयोगको सुविधाहरू जाँच गर्न चाहानुहुन्छ र के तपाईं अनुप्रयोग को प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर सोच्न चाहानुहुन्छ.
के तपाइँ नयाँ र उत्साहजनक स्थानहरूमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ?? के तपाईंलाई स्कूल वा व्यवसायको लागि भाषा अनुवाद आवश्यक छ? वा तपाईं केवल नयाँ भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ?
केहि अनुप्रयोगहरूले भाषा शब्दकोशमा विशेषज्ञता दिन्छन् जबकि अन्य वाक्यांशहरूमा केन्द्रित हुन्छन्. केहि अनुप्रयोगहरू सबै अनुवादको बारेमा हुन्छन् जबकि अन्यहरूले लाइभ दुभाषे बदल्न सक्छन्.
अनुप्रयोग स्टोरहरू जाँच गर्नुहोस् र प्रत्येक अनुप्रयोगको समीक्षा पढ्न निश्चित गर्नुहोस्. अनुप्रयोग उत्तरदायी छ? के विकासकर्ताहरूले प्रश्नहरूको जवाफ तुरून्त दिनुहोस्?
उत्तम भाषा अनुवाद अनुप्रयोग सुविधाहरू
सबै भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू समान रूपले सिर्जना गरिएका छैनन्. केहि (प्राय: नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू जस्तै गुगल अनुवाद वा माइक्रोसफ्ट ट्रान्सलेटर) धेरै सुविधाहरू छन्, घण्टी, र सीटीहरु - तर सही पाठ अनुवाद गर्न सक्दैन.
यदि तपाईं कुनै अनुप्रयोग खोजी गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई बोर्डरूम वा कक्षाकोठामा संवाद गर्न मद्दत गर्दछ (वा अन्तिम मिनेट यात्रा को लागी पनि), हामी सिफारिस गर्दछौं कि एउटामा जानुहोस् जससँग कम्तिमा यी सुविधाहरूमध्ये केही छ:
क्यामेरा अनुवाद (मेनू र सडक संकेतका लागि)
भाषा अनुवाद अनुप्रयोग सटीकता
सम्भवतः भाषा अनुवाद अनुप्रयोगको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू मध्ये एक यसको शुद्धता हो. वास्तबमा, भाषा अनुवाद सफ्टवेयर वास्तव मा कुनै उद्देश्य को सेवा छैन यदि यसको अनुवाद सही छैन!
दुर्भाग्यवश, भुक्तान गरिएको र नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू बीचको मुख्य भिन्नता मध्ये एक अनुप्रयोगको सटीकता हो. धेरै जसो नि: शुल्क अनुप्रयोग भुक्तान गरिएको रूपमा सही छैनन्. यो निश्चित गर्न एक अनुप्रयोग यसलाई प्रयोग गर्नु अघि सही छ, तपाइँ चाहानुहुन्छ:
अर्को भाषाको नेटिभ स्पिकरमा यसको प्रयास गर्नुहोस्
अनुप्रयोगको समीक्षालाई अनुसन्धान गर्नुहोस्
यसको शुद्धता अन्य अनुप्रयोगहरूको शुद्धतासँग तुलना गर्नुहोस्
अर्को भाषाको नेटिभ स्पिकरमा अनुप्रयोग प्रयोग गर्दै (वा पहिले नै थाहा पाउनु भएका दुई भाषाहरूमा अनुप्रयोगको वाक्यांश पुस्तक र अनुवाद सुविधा जाँच गर्दै) यसको शुद्धता निर्धारण गर्न सक्दछ.
धेरै नि: शुल्क अनुप्रयोगहरूले शाब्दिक अनुवाद प्रदान गर्दछ र भाषणको तथ्या for्कको लागि खाता गर्दैन.
धेरै निःशुल्क र भुक्तान अनुप्रयोगहरू अब भ्वाइस अनुवाद प्रदान गर्दछ. केवल भोलि तपाईं के भन्न चाहानुहुन्छ आवाज सक्रियता सुविधा सक्रिय भएको साथ. अनुप्रयोगले तपाईंको इच्छित भाषामा बोलिएको शब्द अनुवाद गर्नुपर्दछ.
त्यहाँ दुई तरिका छन् तपाईको आउटपुट: कि त पाठ वा अडियोमा. केही अनुप्रयोगहरू अडियो अनुवाद प्रस्ताव गर्न पर्याप्त परिष्कृत छन् जबकि अन्य अनुप्रयोगहरूले केवल लिखित प्रदान गर्दछ.
स्पष्ट रूपमा, आवाज इनपुट र आउटपुट आदर्श हो, तर सबै अनुप्रयोगहरूले प्रदान गर्दैन. सब भन्दा आदर्श सुविधा एक स्मार्टफोन मा अनुप्रयोग को लागी पछाडि च्याट गर्न को लागी क्षमता मा हो कि केहि मा पढ्न को आवश्यकता छैन.
राम्रो अनुवाद अनुवाद अनुप्रयोग के हो यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंसँग इन्टरनेट वा डाटा सेवामा पहुँच हुन्छ?
हामी मध्ये धेरैले गोमा अनुवाद अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दछौं, इन्टर्नेटको मृत ठाउँहरूमा, र यात्रा गर्दा. यो अनुवाद उपकरणको आवश्यकता धेरै सामान्य छ जब तपाईंसँग सेवा छैन.
धेरै सशुल्क र नि: शुल्क अनुप्रयोगहरूले तपाईंको स्मार्टफोनमा सम्पूर्ण अनुप्रयोग र वाक्यांशपुस्तक डाउनलोड गर्ने क्षमता प्रस्ताव गर्दछ, तपाईंलाई भ्वाइस र / वा पाठ अनुवाद पहुँच गर्न अनुमति दिँदै - तपाईं ग्रिड बन्द भए पनि.
यदि तपाईं अनुप्रयोग प्रयोग गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ केवल समयहरूमा जब तपाईं ईन्टरनेट पहुँच को आशा गर्दै हुनुहुन्छ, यो यस सूचिमा सब भन्दा थिच्ने सुविधा नहुन सक्छ. तर हामी सँधै महसूस गर्छौं कि यो भाषा अनुवादको कुरा आउँदा पछुताउनु भन्दा सुरक्षित रहनु उत्तम हुन्छ.
Vocre अनुप्रयोग वाई-फाई वा एक इन्टरनेट जडान बिना अनुवाद प्रदान गर्दछ. तपाईको एक जडान छ जब मात्र वाक्यांश पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस्, र यो तपाइँको लागि अफलाइन उपलब्ध छ.
भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरूको एक कल्पित सुविधाहरू वास्तविक-समयमा भाषाहरू अनुवाद गर्ने क्षमता हो. तपाईंको अनुप्रयोग अनुवाद गर्न को लागी पर्खनुको सट्टा, केहि परिष्कृत अनुप्रयोगहरू वास्तविक समयमा अनुवाद गर्न सक्दछन् (जस्तै स्वचालित दुभाषे).
कम सामान्य बोल्ने भाषाहरू
प्राय: अनुवाद अनुप्रयोगहरू प्रायः बोल्ने भाषाहरूको समान सूचीको साथ आउँदछन्:
तर के तपाईं एक भाषा को लागी एक अनुवाद आवश्यक छ कि दुनिया भर मा यति व्यापक रूपले बोलीएको छैन?
धेरै भाषाहरू अनुवाद अनुप्रयोगहरूले कम-सामान्य रूपमा बोल्ने भाषाहरूको लागि अनुवाद प्रदान गर्दछ, तागालोग जस्तै, खमेर, नेपाली, कुर्दिश, र अधिक. यी अनुप्रयोगहरूले स्कूलहरूलाई मद्दत गर्दैछन्, अस्पतालहरू, र अन्य संगठनहरूले बिरामीहरूसँग कुराकानी गर्छन्, विद्यार्थीहरु, र ग्राहकहरु.
अधिकतर अनुप्रयोगहरूले सबै भन्दा सामान्य भाषाहरू सहि र पाठमा अनुवाद गर्दछ. तर केवल केहि अनुप्रयोगहरूले यी कम-सामान्य भाषाहरू अंग्रेजीमा अनुवाद गर्दछ, फ्रेन्च, स्पेनिश, र अधिक.
भुक्तान बनाम नि: शुल्क भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू
भुक्तान गरिएको र नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू बीच सब भन्दा ठूलो भिन्नता भनेको अनुप्रयोगहरूले प्रस्ताव गर्ने सुविधाहरूको संख्या हो - र अनुप्रयोगको सटीकता.
तैपनि हामी बुझ्दछौं कि सबैलाई उच्च-टेक अनुप्रयोगको आवश्यक पर्दैन जसले सबै घण्टी र सिटाहरू राख्छ.
यसैले हामीले दुबै निःशुल्क र भुक्तान अनुप्रयोगहरूको सूची कम्पाइल गरेका छौं र प्रत्येक अनुप्रयोगको लागि सुविधाहरूको सूची समावेश गरेका छौं. यदि तपाईंलाई शाब्दिक अनुवादको लागि मात्र अनुप्रयोग चाहिन्छ भने, आधारभूत पाठ अनुवाद, र सबै भन्दा सामान्य भाषाहरू, हामी निम्न नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू सिफारिस गर्दछौं.
यदि तपाईंलाई भ्वाइस इनपुट र आउटपुट भएको एउटा अनुप्रयोग चाहिएको छ भने, अनुवाद गरिएको भाषाहरूको लामो सूची समावेश गर्दछ, र धेरै सही छ, हामी भुक्तान अनुप्रयोगहरूको सूची जाँच सिफारिस गर्दछौं.
सशुल्क भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू
सशुल्क भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरूले धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछन् र नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू भन्दा बढी सटीक छन्. यी अनुप्रयोगहरूले एक महिनामा केहि अतिरिक्त डलर तिर्न लायक छन् किनकि यसले तपाईंको समय बचत गर्नेछ - र सायद थोरै विवेक पनि.
सर्वश्रेष्ठ भुक्तान अनुवाद अनुप्रयोग: Vocre
Vocre अनुप्रयोग अहिले उपलब्ध एक उत्तम भुक्तान अनुप्रयोग हो. हामीसँग एप्पल स्टोरमा 7.7-स्टार रेटिंग छ. Vocre समीक्षकहरूले अनुप्रयोग भ्वाइस आउटपुट अनुवाद साथै पाठ अनुवाद प्रदान गर्दछ.
हामी अक्सर शिक्षकहरूबाट सुन्छौं कि उनीहरू Vocre भेट्टाएकोमा धेरै कृतज्ञ छन्; अनुप्रयोगमा भ्वाइस-आउटपुट सुविधा प्रयोग गर्नु अघि, यी शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्न संघर्ष गरे जुन कक्षाकोठामा भाषा बोल्दैनन्.
अनुप्रयोगले तपाईंलाई तुरून्त कसैको साथ विदेशी भाषामा च्याट गर्न अनुमति दिन्छ. तपाईं जहाँ जानुहुन्छ तपाईंको अनुवादकलाई आफूसँग लैजान अफलाईन मोड प्रयोग गर्नुहोस् - तपाईंसँग इन्टरनेट पहुँच छ वा छैन!
Vocre बीबीसी समाचार मा चित्रित गरिएको छ, टेक क्रंच, गिजमोडो, रान्टेउर, र जीवन ह्याकर.
अन्य भाषाहरूमा व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नुहोस्, व्यावहारिक वास्तविक समयमा.
सशुल्क अनुवाद अनुप्रयोग रनर अप: त्रिप्लिo्गो
जबकि भोक्रे भुक्तान कोटीमा सर्वश्रेष्ठ भाषा अनुवाद अनुप्रयोगको रूपमा छ, हामी स्वीकार गर्दछौं कि हाम्रो अनुप्रयोग बजारमा केवल भुक्तान गरिएको अनुप्रयोग मात्र होइन.
यदि तपाईं यात्रा मा योजना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं अनुवाद अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जुन केहि अन्य सुविधाहरू प्रदान गर्दछ, पनि. ट्रिपलिoको अनुप्रयोगले भाषा अनुवाद साथै अन्य यात्रा सेवाहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै टिप क्यालकुलेटर, सांस्कृतिक नोट, र सुरक्षा उपकरणहरू.
अवश्य, अनुवाद उपकरण Vocre को रूपमा उच्च मूल्या rated्कन गरिएको छैन - तर यदि तपाईंलाई यात्रा को लागी अनुप्रयोग आवश्यक छ, हामी यसको अन्य सहयोगी उपकरणहरूको सिफारिस गर्दछौं.
नि: शुल्क भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू
हाम्रो मनपर्ने निःशुल्क भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू Vocre आफ्नै MyLanguage अनुप्रयोग समावेश गर्दछ, सधैं लोकप्रिय गुगल अनुवाद (यसको विस्तृत उपलब्धता को लागी), र अमेजन अनुवाद (यसको नि: शुल्क सुविधाहरू र अपग्रेड गर्न योग्य सेवाहरूको लागि).
के तपाईंलाई थाहा छ Vocre ले हाम्रो लोकप्रिय सशुल्क अनुप्रयोगको नि: शुल्क संस्करण प्रदान गर्दछ? जब यो प्रकाश अनुप्रयोगमा आउँदछ जुन सटीक अनुवाद र उत्कृष्ट समीक्षा प्रस्ताव गर्दछ, MyLanguage ers-सितारा निःशुल्क अनुवाद अनुप्रयोगहरूको समीक्षाकर्ताहरूको सूचीको शीर्षमा छ!
अ Translate्ग्रेजी अनुवाद गर्नुहोस्, स्पेनिश, फ्रेन्च, पोर्तुगाली, मन्डारिन, अफ्रिकी, अल्बानियन, अरबी, अर्मेनियाली, अजरबैजानिया, बास्क, बेलारूसी, बंगाली, बोस्नियाई, बल्गेरियन, बर्मी, कम्बोडियन, कातालान, सिबुआनो, र अधिक.
यो नि: शुल्क अनुप्रयोगले कम सामान्य बोल्ने भाषाहरूको साथ साथै ग्रहमा सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषाहरूका लागि अनुवादहरूको विशाल सूची प्रदान गर्दछ।.
समीक्षकहरूले यो नि: शुल्क अनुप्रयोग कति सही छ मनपर्दछ. नेटिभ स्पिकरहरू पनि एप्पल अनुप्रयोग स्टोर र गुगल प्लेमा अन्य नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू भन्दा अनुप्रयोग एकदम सटीक छ भनेर सहमत छन्.
गुगल पुराना हो तर गुडी. यो सम्भवत सबै भन्दा राम्रो मान्यता प्राप्त अनुवाद अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो - गुगल ब्रान्ड मान्यता को लागी धन्यवाद.
अनुप्रयोग सजिलैसँग उपलब्ध छ (तपाइँको मनपर्ने खोजी ईन्जिनको गृहपृष्ठमा) र अनुप्रयोग स्टोरमा डाउनलोडको लागि.
जबकि गुगल आफ्नो अनुप्रयोग अधिक र अधिक सही बनाउन कडा परिश्रम गरिरहेको छ, व्यापक रूपमा उपलब्ध छ, र निश्चित गर्नुहोस् कि यसले कम-कम भाषाहरू समावेश गर्दछ, यो अनुप्रयोगसँग अझै पनि यसको कमजोरीहरू छन्.
अमेजनले दुबै भुक्तान गरेको र यसको अनुवाद अनुप्रयोगहरूको नि: शुल्क संस्करण प्रदान गर्दछ. यदि तपाइँलाई चुटकीमा शब्दको अर्थ जाँच गर्न आवश्यक छ भने, यस अनुप्रयोगले तपाईको लागि केवल त्यस्तै गर्नेछ.
मुख्य नकारात्मक पक्ष भनेको यो हो कि तपाईंको नि: शुल्क सदस्यता समाप्त भए पछि, तपाईंले अनुवाद प्रत्येक वर्णको लागि भुक्तानी गर्नु पर्छ. भुक्तानको रूपमा तपाईं जानु मोडेल केवल यहाँ अनुवादित शब्द अनुवाद हेर्नेहरूका लागि राम्रो छ, तर यो दैनिक अनुवाद आवश्यक मानिसहरूका लागि यो आदर्श छैन.
अधिकांश अनुवाद अनुप्रयोगहरूले बिभिन्न भाषाहरू अनुवाद गर्न सक्दछन्, फ्रेन्च र स्पेनिश जस्तै, तर के तपाईंलाई थाहा छ Vocre अनुप्रयोग कम-कम भाषाहरू पनि अनुवाद गर्न सक्दछ, पनि?
अनुप्रयोगमा केवल केही भाषा वाक्यांश पुस्तकहरू समावेश गर्दछ:
जहाँ अनुवाद अनुप्रयोगहरू खरीद गर्नुहोस्
अधिकतर अनुवाद अनुप्रयोगहरू एन्ड्रोइडका लागि गुगल प्ले स्टोरमा आईफोन र आईओएसको लागि स्टोर र स्मार्टफोन स्टोरमा स्मार्टफोन र आईप्याडहरूको लागि उपलब्ध छन्.
तपाईं फेला पार्न सक्नुहुन्छ Vocre दुबैमा अनुप्रयोग गुगल प्ले र एप्पल अनुप्रयोग स्टोर.
कुन भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू तपाईको मनपर्ने हो? के तपाई प्रयोग गर्नुहुन्छ? शिक्षाको लागि अनुप्रयोगहरू वा व्यापार अनुवाद? यात्रा को बारेमा के? कुन सुविधाहरू तपाइँ तपाइँको मनपर्ने भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरूमा थप्न चाहानुहुन्छ? Vocre को डाटाबेसमा थप गरिएको कुन भाषाहरू तपाइँ हेर्न चाहनुहुन्छ??
हाम्रो लागी फेसबुक पृष्ठ र हामीलाई टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्!